Apple fanboys waxay jecel yihiin Android. Runtii? | Wararka IPhone
Apple fanboys waxay jecel yihiin Android. Runtii?
Cinwaanka hoostiisa "Apple fanboys JACAYL Android", kanaalka Dit Waa Caado, laga bilaabo Nederlandka "tani waa caadi" (haa, haa ...), ayaa abuurtay fiidiyow hubaal ka dhigi doona akhristayaal badan oo News News ah qosol. Maqaalkani kuma talo jirno inaan bilowno dagaal ah in Android ka roon yahay ama ka xun yahay, laakiin aan wax ka weydiineyno fiidiyoowga su'aasha laga qabo. Sidoo kale ma ahan inaan dooneyno inaan uga dhigno iyaga booqashooyin fiidiyoow ah, waxaan dhihi lahaa, ugu yaraan, su'aal baa ka taagan, laakiin waxaa habboon in laga hadlo, gaar ahaan baloog ay ku jiri doonaan akhristayaal "fanboys" sida ay ku yiraahdeen fiidiyowgaan .
Aan isku dhigno xaalad. Laba qof ayaa wareysanaya waxa loogu yeero fanboys tufaax con terminal la mid ah iPhone 6, waxay u sheegaan inay tahay nooca xiga ee macruufka, kaas oo la sii dayn doono bisha Sebtember iyada oo loo marayo magaca iOS 9 iyo intaas runti wuxuu ku rakiban yahay android. "Taageerayaasha Apple" ayaa si isku mid ah u sheegaya in nidaamku yahay mid cajiib ah isla markaana uu si weyn ugu hagaagayo macruufka 8.
Laakiin aan u gudubno qaybo: Muxuu muuqaalkaani muujinayaa? Runtii ma muuqato waxba. Immisa qof ayey wareysteen? Lama oga. Fiidiyowgaan waxaan ku aragnaa oo keliya dadka, ra'yigeyga, aan u istaagin inay ka fekeraan waxa la tusay, aan waligood taaban IOS ama leh dhibaato xagga aragtida ah oo daran. Waxa kale oo jira hal shay oo dareenkeyga soo jiitay: muuqaalka fiidiyowga, oo aad u gaaban si loo soo gabagabeeyo, uma oggolaan inuu taabto taleefanka ay u muujinayeen qof kasta oo la wareysanayo. Lamaanaha wareysiga ayaa wada qabtay waqtiga oo dhan. Sababta Waa maxay dhibaatadu? Maxay ka baqayaan? Waxaa jirta suurtagalnimada in kaftanku ku bilaabmay iyaga oo u oggolaanaya iyaga inay taabtaan beenta-iPhone 6 iyo in dadka la wareystay ay ogaadeen wax, laakiin durba aad ayey u qiyaaseysaa. Daawashada fiidiyowga waxaan kaliya oo xaqiijin karnaa in qof la wareystaa uusan wax ka qaban karin terminaalka.
Waxaa kale oo i haleelay xaqiiqda ah inuu jiro fanboy Samsung ah («Waxaan u maleynayaa inay sifiican u muuqato sidoo kale waxaan doorbidaa sawirka codsiyada, laakiin waxaan sii ahaan doonaa Samsung fanboy ») ma ogid waxa aad arkaysid. Waxaa sidoo kale jira Apple "fanboy" Apple ah oo sheegay inuu jecel yahay waxa uu arko oo doonaya inuu iibsado iPhone. Fanboy aan iphone laheyn ??? Haddii aan daacad u noqdo, kaftanka dhinac iska dhig, waxa ka socda fiidiyowgaan ayaa ah inay si fudud u qaateen wixii ay xiisaynayeen, si macquul ah. Mid kastaaba inuu gunaanadkiisa gaadho ee aan hore u kashifay tayda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Android » Apple fanboys waxay jecel yihiin Android. Runtii?
android ayaa fiican !!
Jawaab Alejandro Jano Tex
Waa tusaale cad in IPhoneku yahay moodada.
Jawaab Willy Nij
Waxaan isticmaalay iPhone muddo sanado ah, waan iibsaday sababtoo ah waan jeclahay, waqtiyadaas waxaan shaqeeyay bilo si aan awood ugu yeesho nafteyda, kuwa iibsada iPhone-ka moodada moodada ah ma daneeyaan waxa ay yihiin, ilaa iyo inta ay haystaan ​​iPhone , marka laga reebo in loo muujiyo qof walba si isku mid ah
Jawaab Victor Alfonso Toledo
Dabcan haddii aad tahay horyaal, wax badan iiga sii sheeg sida ay Android ufiicantahay ...
Jawaab Pablo Pardo
Ios wuxuu leeyahay qalab iyo barnaamij kafiican
Jawaab Nick Jean Cornejo Castro
Ma jiraan wax khuseeya maqaalka.
Fadlan. Maxaan jecel nahay Android? Muxuu jahli ... aragti ka bixin waayey
Salaan Alejandro. Ma aqriday?
Carlos torres m dijo
Markii ugu horreysay waxaan haystay 2 nidaamyada hawlgalka, Android waxay leedahay waxyaabo badan oo aan ku muujiyo, laakiin dhab ahaantii ma jiraan wax la mid ah ururka Apple, iswaafajinta ay la leedahay iTunes waa mid u gaar ah, kuwa xabsiyada ku xirxiray waxaan ognahay inaan maalin walba isbeddel sameyn doonno hacks heegan ah, Iyo ugu dambeyntii, iyo waxaan u maleynayaa inay aad muhiim u tahay, in la isbarbar dhigo terminal kasta oo iPhone ah oo ku saabsan hoos u dhaca qiimaha waa mid aad u cajaa'ib badan, mid ka mid ah iPhone ayaa mar kale iibiya dhibaato la'aan iyo qiime aad u wanaagsan, xusuusnow € 100 dhibic s6, pal oo raba inuu iibsado nooca cusub ayaa la helay.
Ujawaab Carlos toorey m
Fiidiyowgu wuxuu muujinayaa waxyaabo horay loo yaqaanay:
1.- Suuqa ugu badan ee Apple waa dad aqoon yar ama aan aqoon u laheyn qalabka iyo softiweerka.
Qodobkani ma xuma, wuxuu rumaysnaa in iyaga la siiyo xal fudud oo xitaa ilmuhu xamili karo (oo run ah) waa wax aad u wanaagsan.
2.- Mashiinnada suuqgeynta ee Apple ayaa maydha maskaxda.
Waxaa jira dad u maleynaya in haddii aad u keento tufaax qaniinyo calaamad ahaan, waa wax tayo leh, xitaa in kasta oo ay jiraan "albaabbo" fara badan (Shaqooyin tilmaamaya inaysan aqoon sida loo haysto iPhone).
Tusaalaha ugu cad waa sheekada ah in Apple-ka OS-keedu yahay 100% mid aamin ah oo aan virus lahayn… Marka qofkasta oo aqoon yar u leh infirmatuca uu ogyahay in OS kasta, shirkada uu doono ha ka soo jeedo, ay u nugul tahay noocyada kala duwan ee weerarka.
Taasi run maahan…
Jawaab José Alonso Perusquia Sixto
Fanboys Anti dijo
Maaha inaad adigu shaqooyin diid tahay, ee waa inaad tahay qof faneed aad u daran oo Android ah, in kasta oo laga yaabo inaad diido inaad aqbasho. Xamaasaddaadu waxay qarinaysaa xukunkaaga, weligaa awood uma yeelan doontid inaad faallo ka bixiso qoraal aan eex lahayn inta aad u oggolaanayso Google ama Apple inay wax ka qabtaan madaxaaga, in kasta oo kiiskaaga ay caddahay in Android uu yahay ilaahaaga.
Jawab Anti fanboys
Shaqooyinka lidka ku ah waxaan u maleynayaa in jawaabtaadu ay xoogaa waqtigeedii dhacay. Waa daal in la maqlo in kuweena Apple haysta ay waxyar ka yar yihiin dib-u-dhac iyagoo aan wax fikrad ah ka haysan oo aan ku bixinno wixii aan dooneynay sida inay dahab u tahay rumaysad fudud oo indho la'aan ah.
Waxaan haystaa iPhone, sidoo kale Apple maxaa yeelay waxaan haystaa mac, iPad, iPod… (maalinta barakeysan) laakiin waxaan haystay pc iyo android sidoo kale. Waxaan u isticmaalaa si gaar ah iyo heer shaqo. Maalin kasta waxaan u isticmaalaa qayb ka mid ah kumbuyuutarradeyda Apple sidoo kale pc iyo android shaqada. Waan ogahay waxa ay yihiin, waxaan u isticmaalaa maalin kasta oo aan ku maareeyaa xooggooda iyo daciifnimadooda.
Waxaan ku maaweeliyey softiweer aad u tiro badan, qalab-gacmeed, farsamo-yaqaanno, nidaamyo… iyo konton dibin daabyo kala duwan. Anigu ma ihi saynisyahan kumbuyuutar sidoo kale iskama dhigo. Tilmaan in cad. Waxaan rabaa qalab deg deg ah, fududahay in la isticmaalo, oo leh xulashooyin kala duwan oo loo isticmaalo iyo, wixii ka sarreeya, taasi ma guul darreysato. Waxaan rabaa inuu wax sameeyo markaan u sheego inuu sameeyo, muddo.
Waxaan isticmaalaa afar emayl, internetka, shabakadaha bulshada ee kaladuwan, shirarka fiidiyaha, dhaqdhaqaaqyada baananka ... Wax walba oo taleefankayga casriga ah kujira. Sidaa darteed adeegsigeygu aad buu u daran yahay. Oo bal fiiri, waxaas oo dhan oo adeegsanaya iyada oo aan si fiican loo fahmin sida aad u leedahay iyo maskax yar sababta aad u iibsanayso Apple (waa maxay waxyaabaha nolosha leh !!!)
Waad ogtahay runta wax walba. Intaad dhaleeceynayso fanboysyada waxaan adeegsanaa nidaam deggan, deg deg ah oo habsami leh. In kasta oo ay bilawdo in android ay fashilanto sannad kasta iyo mar kasta oo qalabka tufaaxu hoos u dhaco isla markaana ay soo baxaan. Iyo intii taleefankayga hore ahaa iPhone 4s oo aan isticmaali jiray ku dhowaad shan sano welina waan haystaa oo Samsung-kayga cajiibka ahi wuu shaqeeyaa laakiin waxyar ayaa sanad kayar. Intaas oo kaliya maahan, waxaa kale oo dayactir kale oo xaaskeyga ah oo hal sano iyo seddex billood soconaya iyo sababta uusan u rarneyn.
Taasi waa xaqiiqda intaad ku luntay qeexitaanada farsamo, naqshadeynta, astaamaha super ee aan cidina isticmaalin ... Hagaag, ma jiraan wax la raacayo oo caqli badan oo leh android, Windows iyo kuwa kale in ay jiraan kuwa runti caqli leh, u isticmaal dhab ahaan iyo rabitaan inaad u isticmaasho taleefanka casriga ah waxa uu yahay oo aanad tijaabin sida filimada 007.
Dhanka, faa'iidooyinka, u qaado mobiil super shiine ah oo warqad ku jira ... Bufffff maxaa mishiinno ah !!!
Hahaha Dan waa qosol, maadaama ay macquul tahay in "fanboy" uusan ogeyn in waxa uu arkaayo ay yihiin Android, taas awgeed, waa inuusan wax fikrad ah ka heynin IOS. Waa fiidiyowgii ugu doqonsanaa ee aan abid arko.
Waa nacasyo aan waxba ogayn
Jawaab Carlos Manuel Guerrero Duarte
Roberto Payres Ochoa dijo
Mudanayaal, sida ugu fudud ee soo socda, waa mid aan qaan gaarin in lagu qiimeeyo nidaamka qalliinka oo xoogaa qasabado ah, ha noqdaan os, iOS, android, windows, iwm. Si aad u bixiso qiimeyn xoog leh, waa inaad ugu yaraan 15 maalmood kula noolaataa softiweerka, oo aad go'aamisaa dheecaanka, amniga, iwm. sidee loo sameeyaa? fudud, adeegsiga inta lagu jiro maalinta, rakibidda barnaamijyada, iwm. tijaabi adkayntaada. Tani waa sababta ay u jiraan tijaabiyayaal beta, iyo xitaa sidaas, ka dib nooca rasmiga ah waa inaan sii wadnaa shaqada.
in midba kan kale ka fiican yahay, waa horaba dhadhan. android, waxay leedahay ikhtiyaarro aad u tiro badan si hawl loo gaadho, si la mid ah waxay leedahay waxyaabo aan macruufka lahayn. IOS marwalba waa dareere xitaa taleefanka 0 megabytes. Waxa cad waa in qalabka maanta ee telefoonada oo dhami isku mid yihiin, samsung, lg, htc, sony, tufaax, isku si ayey u isticmaalaan, waa inaan aqbalnaa in android ay soo afjartay sixirkii haysashada taleefan noocaas ah iyo saaxiib sida nooc kale oo iskuday khibrada gaarka ah ee barnaamijyadeeda kaladuwanaanta. Hadda telefoonnada oo dhami waxay leeyihiin isku weji oo ma jiro wax farqi ah, oo ka mid ah waxyaabaha kale ee aan sida ugu badan uga faa'iideysan ama qaab shaqsiyeed u ahayn qodobbada muhiimka ah ee qalabka, maxaa yeelay saldhiggaaga had iyo jeer waa isku mid. Had iyo jeer waan dhahi jiray, haddii shirkadaha teknolojiyadda, gaar ahaan kuwa casriga ah, ay rabaan inay noqdaan kuwo tartan badan, waa inay ku shaqeeyaan Os-keeda, oo had iyo jeer isbeddel sameeyaan.
Jawaab Roberto Payares Ochoa
@ Chema: Akhriste faalladaada kadib waxaa ii cadaatay inaadan fahmi karin waxa aan qoray, gaar ahaan waxyaabaha soo socda:
Aqlabiyadda, waligey ma oran qof walba. Hadda, anigu uma arko hadalkaas mid meel ka dhac ku ah; Kama aqaano cilmiga xiddigiska (sida bini-aadamka badankiisa) taasna ma iga dhigeyso doqon ama qof ka xun.
Dhinaca kale, dhanka kale ma aadan fahmin waxa soo raacay:
Bixinta fudeydka ku dhowaad nidaamka qaladka-caddeynta aadanaha (ee xanuunka OS xaddidan) waa wax lagu qanco.
Dhibaatadu waa xagjirnimo ay taageerto suuqgeyn. Sida iska cad Apple wuxuu dhihi doonaa, tusaale ahaan, in kamaradeeda ay tahay tan ugu fiican suuqa. Laakiin taasi kuu sheegi maayo inay tahay shiddo Sony ah, oo dhererkeedu aad u duugoobay (2.2 laakiin waan qaldamay) iyo mid xadidan oo ISO ah.
Laakiin waxaan u laabaneynaa isla wax, waxaa jira dad (tusaale: Dhamaan gabdhaha kulul ee barta Instagram) oo aan dan ka laheyn waxyaabaha aan kor ku soo sheegnay, kaliya waxay rabaan sawir fudud oo qurux badan. Ma waxbaa ka khaldan taas? Aniga aragtidayda, maya.
Waxaan tixraacayaa faalladaada.
Waxaa jira dad u maleynaya in haddii ay u keento tufaax qaniinyo ah astaan ​​ahaan, inay tahay wax tayo leh, in kasta oo ay jiraan "albaabbo" badan (Shaqooyin tilmaamaya inaysan aqoon sida loo haysto iPhone).
Maskaxda Waayahay okay.
Sida sawir qaadista, waxbadan ayaan ka ogahay mowduuca maadaama aan ahay Sawir qaade.
Miyaad tafatiray sawirada taleefankaaga casriga ah ??? Miyaad ku daabacday qiyaaso aad u tiro badan ??? (Oo kani ma aha 10 × 15 ama xitaa 20 × 30). Tani waxay lamid tahay markaad iibsanayso kamarada gorgortanka waana mid aad ugufiican megapixels.
Marka laga hadlayo furitaanka haddii 2.2 ay tahay mid waqtigeedii dhacay ... Waxaa jira fikrado badan oo badan oo la turjumi karo. Dhanka kale, Dareeraha Sony waa midka ugu fiican suuqa waxaana ku rakiban kaamirooyin badan, taas oo aan wax xun ahayn.
Xaddidan ISO ??? Ku xaddidan maxaa ??? Maxaan haysan 12000 iso ??? Ma helayo.
Waan ku celinayaa wixii aan iri, keenida tufaaxu waa astaan ​​tayo ??? Maya Laakiin isticmaalka kadib waxaan kuu sheegi karaa inuu si buuxda tayo u leeyahay.
Dagaalkan Apple iyo inta soo hartayba waa mid aad loo jabsaday. Maanta waa android, berri waxay ahaan doontaa x ka dibna y ... iOS wali waa joogaa oo natiijooyin la isku raacsan yahay ayaa waqti ka dib leh. Ma jiraan makiinado dharka lagu dhaqo iyo aqoon la’aan. Waxa jira ayaa ah inaan sifiican u sameeyo AppleTalk waa waxa aan haysto. Android ayaa ugafiican midkale ??? Hagaag, isticmaal. Laakiin mishiinka suuq geynta, aqoonta, midka bixiya sawirka oo aan ku bixin tayada ...
Had iyo jeer waxaan haystay android haddana waxaan haystaa iphone 6 aniguna waxaan ahay isticmaale horumarsan labada nidaamba. Iyo android waxay leedahay waxyaabo xunxun sida hagaajinta xun ee aaladaha qaar sababtoo ah lakabyada soosaarayaasha, laakiin isku xirnaansho nidaamku wuxuu u duulaa si lamid ah iphone. IOS had iyo jeer waa la hagaajin doonaa waqti dheer maxaa yeelay waxa kaliya oo ay leedahay 7 qalab oo la cusbooneysiiyo iyo android waxay la qabsaneysaa noocyo badan oo qalab ah, laakiin macruufka ayaa leh cilado badan oo aan lahayn JAILBREAK, waxyaabo sida ugu fudud u ah sameynta ringtone ka faylashaada mp3, iswaafajinta waa mid aad u wanaagsan itunes, laakiin Caqli gal maahan in tani ay tahay tan kaliya iyo in cod la geliyo iTunes markii ugu horeysay waxaad ubaahantahay cashar, iyo in aadan ku xirmi karin taleefanka pc-ga, nuqulna aad heesahaaga ama sawiradaada adigoon ubaahan a barnaamij qallafsan marar badan. Ama inaadan sawirro ku qaadi karin qaabka 16: 9, sawirrada laba jibbaaran waa wax la soo dhaafay, maalmahan cidna ma haysato kormeer ama TV qaab 4: 3 ah. Dhammaantood waa dusha sare. Kuwani waa waxyaabo kaliya lagu xallin karo JAILBREAK, laakiin inta badan dadka isticmaala xitaa ma yaqaanaan waxa ay tahay, sida inta badan dadka isticmaala android aysan aqoon waxa romka ama xididka uu yahay, marka tani ay kuu ogolaaneyso fursado aan la koobi karayn, marka lagu daro qalabaynta android oo aan lahayn baahida loo qabo tweaks, kaliya adoo ku rakibaya furaha tusaale ahaan. Marka la soo koobo, nidaam kasta wuxuu leeyahay wanaagiisa iyo cilladahiisa, laakiin waxaan ogaaday in macruufka ay ka maqan yihiin waxyaabo aasaasi ah iyo in Apple ay ku cusbooneysiiso dhibic, si ay u iibiso waxyaabaha ku jiray Android sannado, sida inay awoodaan inay ku arkaan kumbuyuutarka Yar yar markaad wax qoraysid, halkii aad had iyo jeer ku qori lahayd xarfaha waaweyn, cibaaro aad u weyn oo macruufka 9 ah, oo xitaa mobiilladii Nokia ee waagii hore lahaa. Taasi waa sababta aan u waydiisanayo dhamaan fanboys inay ogaadaan kahor intaanan hadlin in dhamaan waxyaabaha dhalaalaya aysan dahab ahayn, Applena suuqgeynteeda wanaagsan waxay kaa dhigeysaa inaad aaminto in wax walboo ay sameyso ay fududahay, marka xaqiiqda ay tahay kali talisnimo, mida kugu qasbeysa inaad wax u samee sidaad rabto, xitaa haddii aysan ahayn tan ugu habboon, adigoon siin isticmaaleha ikhtiyaarka uu ku doorto waxyaabo kale.
Fikirkeyga ugu daacadsan waa tan soo socota, waxaan isticmaalayay ios dhowr todobaad laakiin kaliya sababtoo ah waxaa jira Jailbreak nooca hadda ee ios laakiin hadii aysan jirin wax caynkaas ah, waligay ma isticmaali doono aalad leh ios sababo la xiriiro iphone waa xaalad ama mood ayaa sabab u ah waxaad dooneysaa inaad waasho ... wax shaqsi ah ma ahan.
Ku jawaab Luigi
dhamaantiin waxaad tihiin giles
@ Chema, maadaama aad ila ogolaatay (wax jawaab ah oo adiga ka yimid ma jiro).
Ma been baa in Apple ay ku maareyso xayeysiinteeda? Halkan waxaan ku haynaa tusaalooyin:
Markii Apple isticmaashay PowerPC, halku dhigoodu wuxuu ahaa wixii x86 ku salaysan CPU (AMD iyo Intel) inay qashin yihiin. Hadda oo ay kooxahoodu adeegsadaan Intel (mararka qaarkoodna AMD GPUs) shirkaddani waa tan ugu fiican.
Aaway iswaafajintii kuwa ka cawday in kombiyuutarada ay adeegsadaan summaddan?
Isla tusaalooyin leh kamaradaha. Imisa jeer ayaynu akhriyin faallooyinka fanboys ee ka cabanaya kamaradaha aaladaha Android? Qalabka sidoo kale adeegsada dareemayaasha Sonu Exmor sida iPhone.
PS: Waxaan kugula talinayaa inaad wax ka akhrisato LG ama HTC interface interface oo bixisa habeyn dhameystiran oo ah qiimaha ISO (waxyaabo kale) si loo fahmo waxa aan ula jeedo xaddidan.
Maxaa dood xun. Kasta oo ah taleefannada gacanta ee ugu sarreeya dhammaadka Android wuxuu la mid yahay iPhone. Qiimaha wax soo saarka ee IPhone-ka ayaa ka badan $ 200, inta soo hartay waxaad ku bixinaysaa astaanta. Sida inaad iibsato funaanad dolce gabana ah oo lagu tolo Shiinaha waxay la mid tahay kuwa tobanka euro ah waxayna kaa qaadayaan 100. Ma ka fiican tahay? Immisa jahli
Haddii ay i doorteen inta udhaxeysa laba terminaal oo isku mid ah laakiin mid leh Android iyo midka kale oo leh IOS, waxaan qaadan lahaa midka leh IOS. Waxaan ku dheehday labada taleefan ee iOS iyo Android laakiin waxaan ku dheganahay nidaamka ku shaqeeya Apple qofna ma cunin qumbaha ama caanaha.
Way iga qoslisaa .. Sida dad badani faaloodaan inay ka socdaan tartanka! Hadaadan jeclayn maxaad uga faallootaa Maxaad u gashaa bogga iPhone-ka?
Fiidiyowgu waa mid aad ufudud u fahmi kara .. Dadka aan dhaqan qabin ee aan lahayn macruufka 'iOS', oo lahaa labadaba nidaamyada hawlgalka ayaa ogaan doona kan u roon adeegsiga maalin kasta, hadda haddii aan ka hadlayno midka fiican ama ka xun .. Daacad ahaan aniga ! Waxay aad uga fiican tahay macruufka xasiloonida iyo xawaaraha.Uma isticmaalo kala badh processor-ka ama wanka iwm waxkastoo ka badan tarjumaad sare oo android ah oo sifiican ayuu u shaqeeyaa, aniga oo wax badan ka sheegaya terminaalka, oo aan xusin damaanada ama kalsoonida in qalabku wuxuu leeyahay.
Jawaab José bolado
OS ayaa faallo ka bixisay, waligey Apple wax kama helin waana karaahiyo aan u haysto sumadda sababta oo ah fanboysyada u maleynaya in qaadashada iPhone ay ka badan tahay midka kale ee xambaara Android tusaale ahaan, waxaan ka mid ahay kuwa u maleynaya Waxay ku qarashgareeyaan in ka badan 200 euro mobilada mid caqli-gal ah xaqiiqda fudud ee ah haddii aan ku daalay mobilka mid kale ayaan iibsaday lacag badana igama lumin.
Markaa iPhone 6 maaha waxa dadku u maleeyaan ku xigta miinadayda 200 oo yuuro oo horeba u jirtay sannad waxay u socdaan sida ugu dhakhsaha badan, oo lagu caddeeyo furitaanka codsiyada maalin kasta.
Aplee u dhiganta dariiqada !!!
@ Anti fanboys LOL faallooyinkaaga. Ma lihi dookhyo mid ama mid kale, waxaanan ku siinayaa tusaalaha:
Waxaan hayaa 13-inch Macbook PRO (2015) si aan ula shaqeeyo marka lagu daro Xusuusin 3.
Maxaan u isticmaaliwaayaa PC? Si fudud sababta oo ah waayo-aragnimada shaqadu way ka wanaagsan tahay Macbook.
Haddii aan haysto Macbook, maxaan u haysan waayey iPhone? Aad ufudud, waxaa jira sannado waxsoosaar ah oo sifiican ugula shaqeynaya stylus, tusaale ahaan evernote, haku xusin in adeegsiga badan uu kafiican yahay (ma xadidaayo cabirka waxaadna isticmaali kartaa daaqadaha sabayn kara).
Sida aad arki doonto, waxaan u isticmaalaa nooc kasta sida ay ugu habboon tahay wixii aan u baahday. Ma doonayo inaan iibsado sababtoo ah waxay leedahay Samsung ama waxay leedahay tufaax qaniinsan.
Anigu waxaan ahay muusikiiste xirfad leh, waxaanan ku soo koobayaa farqiga u dhexeeya IOS iyo Android saddex eray:
Waxaan haystay android heer sare ah iminkana waxaan haystaa iPhone 6 iyo iPad Air, aalado aan maalin kasta isticmaalo anigoon damin.
In android waxaa yimid waqti taleefanka uu lamid ahaa c ... ..lo, IOS macno malahan inta maalmood ee ay dhaafto wali waa isku mid.
Anigu iskuma tixgeliyo inaan ahay qof fanboy ah, laakiin waa inaan aqoonsanno sababta dhammaan soo saarayaasha muusikada, ama naqshadeeyayaasha garaafka, haddana dad aad u tiro badan ay u isticmaalaan wax soo saarka Apple, waxaa lagu soo koobay hal eray oo ah TAYO, adigaa iska bixinaya, waa hagaag, haa, kaliya intaad bixinayso tayada Mercedes.
Wax kasta oo kale oo laga wada hadlaa waa wax aan jirin, in qof kastaa iibsado waxa uu jecel yahay, muddada.
Jawaabta ilaha: Multitask.
Sidii aan horeyba u sheegay, Xusuus-qorkeyga 3 waxaan u baahanahay inaan dhowr barnaamij isku mar wada qabto. Haddii aadan haysan 3gb, barnaamijyadu si habsami leh uma socon doonaan, kuwa kuwa asalkana ku jira ayaa mar kale la xanuunsan doona markaad isticmaasho.
Taasi waa sababta iPhone ay kor ugu kaceyso ilaa 2GB RAM. Su'aashu waxay noqon laheyd inay kaliya diirada saari doonto barnaamijyada u gaarka ah mise waxay sidoo kale u oggolaan doontaa dhinacyada saddexaad (sida Android).
Haddii aad u jeeddo is-hagaajinta barnaamijka asaliga ah, gabi ahaanba waad saxantahay. Barnaamijyada dhinac saddexaad waa sheeko kale; Barnaamijyada Google waxay si fiican uga shaqeeyaan Android marka loo eego macruufka (tusaale ahaan YouTube).
Android had iyo jeer waxay ahayd mid muuqaal ahaan kaqurux badan macruufka, ios waa quruxsan caajis.
Fiidiyowgu hadduu run yahay iyo haddii kaleba, qaybtaas waxay ka tagaysaa waxyaabo badan oo la doonayo.
Hahahahahahahahahahahaa intee jaahil ah !!!
Waxa kaliya ee ay helaan fiidiyowyadan la maareeyay ayaa ah waxa dhabta ah ee dhacaya waana in ay noqdaan kuwa fayras ku dhaca, iyadoo kumanaan faallooyin ah ay dadka ka hor imaanayaan in Apple ama Android ay ka roon yihiin ama ka xun yihiin isla markaana ay bisadda biyaha u kaxeynayaan, qof kasta indhaha iyo afka.
Kuwa jecel Android waxay iibsadaan midkood iyo kuwa jecel iPhone inay iibsadaan mid kale, waa wax fudud. Kala duwanaanta dhadhanka. Iyo dhadhanka, midabada.
Ku jawaab Cote
5ta barnaamij ee muhiimka ah ee Cydia